Kôngô (RDK) : Resadresaka niaraka tamin’i Cédric Kalonji nahazo ny lokan’ny bolongana miteny frantsay tsara indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2007 8:31 GMT
Bolongana (blaogy) vitsy mpamaky lasa tsy zoviana avy eo. Ny fahazoana loka ho an’ny famahanam-bolongana no manampy be dia be ho amin’izany na farafaharatsiny mampizotra ho amin’izany laza izany. Nanaraka akaiky ity fifidianana bolongana tao amin’ny Deutsche Welle’s Best of Blogs awards (fantatra kokoa amin’ny anarana hoe ‘the BoBs’) ity ny mpamaky sy ny tonian’ny Global Voices, noho ny loka mitsinjara isaky ny fitenim-pirenena hain’ny maro angamba sy izy misehatra iraisam-pirenena ary eo koa ny finiavan’ny mpitsara hampivoitra ireo mpamoaka feo vaovao fa tsy dia variana manome loka ireo fanta-daza hatry ny ela (tsy lazaina intsony fa efa nahazo ny loka 2005 i Global Voices Online ary iray amin’ny mpanohana na mpanome ny loka tamin’ity taona ity).Hitehaka amin’ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ireo izay nanahy ny fahavitsian’ny bolongana afrikana voafantina tamin’ny nanomezany ny lokan’ny taona 2007 amin’ny bolongana miteny frantsay ho an’i Cédric Kalonji, avy any République Démocratique du Congo. (Ity ny famariparitana nataoko ho an’ny Global Voices tamin’ny volana jolay raha nitari-pitsidihana ireo bolongana aho: ‘Angamba ny bolongana Kongoley mahaliana indrindra , tazonin’i Cédric Kalonji, izay ahitana sary sy filazalazana mahatsikaiky sy mampalahelo amin’ny fiainana andavanandron’i Kinshasa, renivohitra feno olona sy maloto
Hoy Cédric rehefa nahita fa nahazo ny loka izy, nosoratany fa:
Fifaliana lehibe fa nekena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny nataoko ary rehareha fa afaka miteny amin’ny anaran’i Congo lehibe. Manome hery lehibe ahy tokoa ity fanekena ity, manampy tosika hanohy ny dia sy ho lasa lavitra mihitsy aza.
Ny andro manaraka, nihaona tamin’i Cédric izaho sy i Nayembi hiara-mikorana nihinana poulet à la moambe, sy ngai-ngai tany Kintambo, faritra maresaka dia maresaka ao Kinshasa. Niresaka momba ny fiainana roan’i Cédric izahay, ny fitomboan’ny mpamakiny, ny kolikoly, ny tsy maintsy hiafinafenana, ary ny momba ilay hita na aiza na aiza antsoina hoe Facebook.
“ Efa ela no nahitako ny aterineto. Tamin’ny fiafaran’ny fitondran’i Mobutu tamin’ny taona 1995 dia ny tao amin’ny governemanta ihany no afaka niditra aterineto, fa nisy namako izay niasa tao amin’ny fiadidiana ny repoblika (prezidansa) ny dadany, dia nankany amin-dryzareo foana aho hampiasa ny seraserany. Tena niadana dia niadana ny fandehany tamin’izany fotoana izany ! avy eo, taorian’ny nianjeran’i Mobutu, no nitsangana amin’izay ny cybercafé ary dia liana ny tanora. Saingy tsy mbola hainy ny nampiasa azy hitadiavam-baovao ka ny sary vetaveta no nojeren’ny ankamaroany.
“Nahita hevitra aho hanazava ny aterineto ho an’ny vao hanomboka hianatra azy tamina fandaharana fahitalavitra saingy nandamoka ilay izy, naleon’ny tompon’andraikitra manko nandefa lahatsarin-kira. Avy eo dia lasa indray aho tany amin’ny Radio Okapi ho amin’ilay hevitra ihany – natsoindry zareo aho ary hitany fa tsara, hono, ny feoko dia nahazo asa aho ary dia nianatra momba ny fampielezam-peo tao.
“Roa taona teo ho eo aho izay no namaham-bolongana. Nisy tarika izahay no niara-nanomboka. Tsy mitovy amin’ny radiô io, samihafa ihany koa ny lohahevitra banjinina, noho izany dia tsy nafangaroko mihitsy izy roa ireo. Tena nanao fiainana roa samihafa mihitsy aho. Ny tena mahafinaritra amin’ny bolongana, samy toy ny mpanao gazety avokoa ny tsirairay. Ny iray amin’ny bolongana tena ankafiziko ohatra dia fahanana saoferana fiarakaretsaka ao Québec [Un taxi du nuit -fr]. Mahery koa ilay zalahy io an ! henoiny avokoa ny karazan-dresaka hafahafa ao anaty fiarany !
“ Tamin’ny voalohany dia saiky hamoaka rakintsary (fa tsy lahatsary raha azonareo ny tiako lazaina) ho an’ny namako fotsiny no fikasako. Dia nasiako fanazavana tsotra toy ny « nahita vondron’ankizin’ny arabe aho ampandehanana ho any ampiasana androany maraina ” eo ambaniny dia izay ihany. Avy eo dia nampiako ny hevitro niaraka tamin’ny sary. Noraisiko ohatra ny fanaovana kolikoly andavanandro, tahaka ireo polisy izay mitaky vola amin’ny mpamily fiara. Manao izany ny polisy tsy noho ny fitiavany hanao kolikoly, fa noho izy tsy manan-tsafidy. Manana ankohonana, ankizy velomina sy ampianarina any an-tsekoly izy nefa na dia ny hofantranony aza dia tsy zakan’ny karamany, inona ary no azony atao ? »Ny fiakaran’ny isan’ny mpamaky
Nanomboka nahazo hafatra avy amin’ny mpamaky aho mba hamahanako bebe kokoa. Tahaka ny faly mahita ny sarin’ny fireneny ny Kongoley any ampielezana. Kongoley any ampielezana hatrany manko ny ankamaroan’ny mpamakiko. Ankafiziko ny mihaona ny sasany amin’izy ireo mba miara-misotrosotro rehefa mankany Eoropa aho. Misy koa avy eo ny mpamaky niaina teto Congo na te-hitsidika azy. Vitsy ny Kongoley avy eto no afaka miditra amin’ny aterineto. Ary izay afaka mijery aterineto indray moa dia ny mikarajia no toa tiany, any manko izy ireo afa-manoratra izay rehetra tiany soratana.
“Hitako ny fiakaran’ny antontan’isan’ny mpitsidika isan’andro avy eo amin’ny 8 isan’andro ho eo amin’ny 15, 35, ary dia tonga teo amin’ny…Ah ! 100 ! Namporisika ahy hazoto ny nahatrarako ny zato mpitsidika isan’andro. Ok, hoy aho anakampo, hiezaka bebe kokoa aho. Nanampy ahy koa ny fananako namana manao ny zavatra nataoko. Lasa toy ny rongony amiko ny mamaham-bolongana (mibilaogy).Mieritreritra ny hapetrako eo amin’ny bolongana hatrany no ao an-tsaiko voalohany vantany vao mifoha aho ny maraina”.
“Niakatra tampoka tany amin’ny 6000 isan’andro ny mpitsidika, alohan’ny itombenany maharitra teo amin’ny 1000 isan’andro teo ho eo, rehefa nofantenan’ny Le Monde aterineto [anaty famandrihana] tamin’ny volana jolay. Omaly izao dia 4000 ny isan’ny mpitsidika. Betsaka tamin’ireo no tonga teo amin’ny bolongako avy tany amin’ny rohin’ny loka Best of Blogs , sy tamin’ny alalan’ny filazana momba ny Best of Blogs navoaka tao amin’ny Reporters Sans Frontières. Nahazo fanehoan-kevitra be dia be tamin’ny mpamaky ahy aho.
Misy namana iray izay moa manavao (miankotrihina) mandrakariva ny takelaka [amin’ny bolongako] mba hijery ny fotoana lany mandrapihavian’ny fanehoan-kevitra voalohany rehefa mamahana lahatsoratra vaovao aho. Lasa miteraka olana moa izany, mba nieritreritra ny hifindra amin’ny vavahadim-bolongana hafa aho (WordPress , amin’ny lafiny sasantsasany mba ahafahana manampy rohy mora kokoa) nefa mieritreritra aho fa ho sarotra dia sarotra ny hamindra ireo fanehoan-kevitra rehetra ireo».Ny fanaovana saripika eto Congo
“Matetika dia manomboka amin’ny sary nalaiko ny lahatsoratro. Entiko miaraka amiko mandrakariva manko ny fakantsariko ary tia mitaratra ny manodidina ahy aho, manamarika sy maka sary ny zavatra tsy tsikaritry ny mpanao gazety hafa aza. Eny an-dalana aho dia mieritreritra avy hatrany izay zavatra hosoratako. Tiako atamberina ao antsaiko ny nanaitra ahy haka ilay sary. Miaina kokoa ny hevitra avy eo.”“Mba misy lohahevitra tiako resahina koa indraindray dia mitady sary aho handravahana azy. Tsy dia miera loatra [ny olona alaina sary] aho, ny 85%n’ny sary nalaiko aza dia nopihako ankinafinafina. Soa fa manana fakantsary [nomen’ny mpamaky an’i Cédric taorian’ny nangalarana ny fakatsariny voalohany], sy karatra maha-mpanao gazety aho raha misy ny olana.Matetika koa aho no manamboamboatra sehatra toy ny mampividy zavatra amin’ny mpivarotra amoron-dalana mba ho ivelan’ny sehatra alaina sary mandrakariva aho. Ohatra ny hoe mampihomehy fa tsy misy na dia iray amin’ny sariko aza efa vita printy nandritra izay efa-taona nakana sary izay. Na izany aza efa nisy olona noresahiko hampiranty ireo saripika ireo. »“Tamin’ny 1 janoary tamin’ity taona ity, taitra aho nahita ny efatra tamin’ny sary nalaiko tamina dokambarotra iray tao amin’ny fahitalavitra! Fa inona ity?! Tsy nangataka alalana tamiko akory ilay olona nametraka azy. Nampanasoniaviko fifanarahana izy dia nasaiko nandoa vola. Resaka fotokevitra izany – matetika aho no manome maimai-poana ny sary angatahiny, saingy misy koa ny sary amidiko mandritra ny fifidianana ».
Ny fanaovana sivana ny tena ihany
“Tsy miresaka politika aho ao amin’ny bolongako. Mitandrina tsara aho. Tena tsindraindray tadiavina ihany aho vao manonona anarana, dia amin'ny zavamisy azo hamarinina sy hitako mivantana. Betsaka ny zavatra henoko saiky tsy afaka ambarako indraindray na dia miantsoantso mafy ao anaty aza izany. Mety hanohintohina manko …”. Ny hoavy
“Mahafapo ahy ny vitako. Ary na dia handao an’i Congo aza aho, mbola hijoro hatrany ny bolongana natsangako ao anatin’ny folo taona, ary dia afaka mamaky sy mahita izay nitranga tamin’ny androtsika ireo hamaky azy. Nahaliana ihany koa ny vanim-potoana, noho ny fifidianana tamin’ny herintaona sy ny ambiny. Nefa mieritreritra aho fa hamaham-bolongana hatrany mandra-pahatapitry ny aiko. Ny tena faniriako moa dia ny hivezivezy manerana an’i Congo, hamaham-bolongana avy any amin’ny faritany samihafa. Mahaontsa ny mahita fa tsy mba mamaham-bolongana ny olona. Mba efa nanolo-kevitra mpanao gazety mahay roa koa aho, ary efa niresaka tamin’ny namako iray hanangana tetikasa hanofana ny olona te-hianatra ny fanaovana azy. Mbola tsy mahalala ny atao hoe bolongana akory ny olona aty…”Momba ny Facebook?
“ Tena Mpankafy aho ! rongony koa io: Manamarina ao aho isa-maraina vao mifoha fandrao dia nahazo namana vaovao – mety tsy ho zatra izany fihetsika izany aho raha nisy vehivavy teo anilako ! Fantaro fa mpikirakira kajimirindra aho, noho izany ny lafiny teknika no tena mahaliana ahy ao anatiny. Mampiaiky volana ny zavabitan-dry zareo. Tena fampisehoana ny hatsaran’ny rindrambaiko tsy itadiavam-bola no nataony. Tsara kokoa, tahaka ny Firefox, ny tolotra noho ny fandraisana anjaran’olona maro mikarakara azy. Tsy dia mampanahy ahy loatra ny fampanajana ny fiainako manokana tsy hoelingelenina, ny laharan’ny findaiko aza anie voasoratra ao amin’ny Facebook e. Fa ny sary eo amin’ny mombamomba ahy dia sarina mpiandry ny valanjavaboary, nalaiko sary, ao Bombo-Lumene no tena marina, izy izao no misolo tena ahy, tahaka ny olona vonona hiaro tena ».
Soratra miverina: The Purple Corner » Africa Features » hors de la Bulle
[…] au meilleur : Cédric Kalonji que nous ne présentons plus mais que nous devons tous suivre […]
08 Jona 2008, 07:04